ငါး ဆနယ်(ဆားနယ်) ကိုဆားမငန်အောင် ချက်နည်း(ရခိုင်နည်းပညာ).. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငါး ဆနယ်(ဆားနယ်) ကိုဆားမငန်အောင် ချက်နည်း(ရခိုင်နည်းပညာ)..
ငါး ဆနယ်(ဆားနယ်) ကိုဆားမငန်အောင် ချက်နည်း(ရခိုင်နည်းပညာ)..
Posted by we R one on Jul 5, 2011 in Creative Writing | 24 comments
အားလုံပဲ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.. အဲမှားလို့ ရွာသူရွာသားတွေရယ်… မတွေ့တာလည်း ကြာပြီ နေကောင်းကြတယ်မဟုတ်လား.
ဒီနေ့ ကျွန်မ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ က တော့.. ငါးဆနယ်(ဆားနယ်) ဆားနှတ်နည်း (သို့မဟုတ်) ဆားမငန် အောင်ချက်နည်းပါ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သိချင်တာက ဒီကလူတွေ ဆားနယ် ရခြင်း အကြောင်းရင်းပါ။ ဆားဘာဖြစ်လို့နယ်ကြတာလဲ? တမင်သက်သက် အငန် စားချင်လို့လား? ဒါမှ မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ တော့ မရှိတဲ့ အခါ အထားခံအောင် ဆားနယ်ကြတာလား?
ကျွန်မ၏ မွေးဖွားကြီးပြင်ရာ နေရာသည် အိမ်ခြေ 100 လောက်သာရှိသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ အနောက်ဘက် မှာ ရှိတဲ့ ရမ္မာဝတီ ခေါ် ရမ်းဗြဲ ကျွန်းပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရေခဲ သေတ္တမပြောနဲ လျှစ်မီးလည်း မရှိပါဘူ။ အဲလို နေရာမျိုးမှာ ငါးတွေဝယ်ထားပြီး ၊ ငါးတွေ ရောင်းမကုန် ပြီဆိုရင် ဘာလုပ်ထားကြမလဲ။ သေချာပါတယ် အာလုံး ဟာ ဆားကို နိုင်နိုင် နယ်ထားကြပါတယ်။
အဲလို ဆားကို အများကြီး ထည့်ပြီး ထားမှ တော့ အဲဒီ ငါးကိုချက်စားတဲ့ အခါ ဆားခဲ့ ကြီးကို စားရသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒီကလူတွေ တော်တော် များများ ကြုံဖူးကြမှာပါ။
ကျွန်မ ကြုံဖူးတဲ့ ရန်ကုန် က လူတွေ တော်တော် များများ ငါး ကို ဆားနယ် ပြီတော့ ဆားမငန် အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တစ်ခါ မှ မစဉ်စားဖူးကြလားမသိဘူး။ သူတို့ ကချက်တဲ့ အခါအရမ်း မငန် အောင် ဆားနယ် ကတည်းက ဆားလျှော့ နယ်ကြတယ်။2ရက်လောက်ထားလိုက်ရော အဲးဒီ ငါးက သိပ်မကောင်းချင်တော့ဘူး ။ ဆားလျှော့ပြီး နယ်လည်း စားမိရင် ဆားခဲကြီးကို စားရသလိုပဲ။
ကျွန်မ တို့လုပ်တဲ့ နည်းကတော့ ငါးမပုပ်အောင် ၊ အကြာကြီးခံအောင် ဆားနိုင်နိုင်နယ် တယ်။ ပြီးရင် ချက်တဲ့အခါ မငန် အောင် ဆားပြန်နှတ်တယ်
ဆားနှတ်ပုံ နှတ်နည်းကတော့ …. လွယ်ပါတယ်။ ဆားနယ်ထားတဲ ငါးကို ရေ2ထပ်လောက်ဆေးလိုက် ၊ ပြီးရင် အဲဒီ ငါးကို ဇလုံတစ်ခု ထဲမှာ စာရွက်(စက္ကူ) ရယ် ၊ ထမင်းကြမ်း ရယ် နဲ ရောြ့ပီး ၁၀ မိနစ်လောက် စိမ်ထားလိုက်ပါ။ (စက္ကူ) စာရွက်ရယ် ၊ ထမင်းကြမ်း ရယ်က ငါးအနည်း အများ ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ များများ ထည့်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။)။ ပြီရင် ရေစင်စင် ဆေးပြီး ချက်လိုက်ပါ။ ပုံမှန် စားနေကြ ( ဆားမနယ်တဲ့) ငါးလို ပြန်ဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ လုံးဝ အားမခံပါတယ်…။
စာရွက်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ … စက္ကူကို ပြောတာလား … အရွက်နံမည်လား ?
သတင်းစာရွက် ဖြစ်ဖြစ် ဂျာနယ်စာရွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာစာရွက် မဆို….
ဆောရီး မဝေ.. စက္ကူ ကိုပြောတာပါ။ ပြန်ပြင်လိုက်ပါ့မယ်..။ အခုလို ထောက်ပြ ပေတး 10Q…
နည်းကောင်းလေး တစ်ခုကို သိသွားတာပေါ့ ….
ဒီတိုင်း နယ်ထားယုံပဲလား.. ရေဆေးထားတာ ဆိုတော့ ရေ အစိုဓါတ်တော့ ရှိရမယ် ထင်တယ်နော်..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဲဒီ ငါးဆားနယ် ဆားနတ်ပြီး ချက်ရင် ငါး အရသာ ချိုပါ့မလား။
အရင် ကလောက်တော့ ချိုချင်မှ ချိုလ်ိမ့်မယ် မဆူး ၊ ဒါပေမဲ့ ဆားခဲ ကို ကိုက်စား နေရသလို မဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ စားလို့ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား..
စမ်းကြည့်ဦးမယ် … ငပိကောင်ဆိုလျှင်ရော အဲ့လို လုပ်စားလို့ အငံလျှော့သွားမှာလားဟင် … ။
နောက်ပြီး စက္ကူက ငါးကို ပတ်ထားရမှာလား … အခင်းကျင်းပုံစံက ဘယ်လိုလေးလဲ ထင်သာမြင်သာလေးဖြစ်အောင် ပြောပြပါဦးနော် ။
စက္ကူ က ငါးကို ပတ်ထားရမယ် ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါး ရယ်၊ စက္ကူရယ်၊ ထမင်း ရယ်ကို ရောထွေးပြီးထားရမှာ ။ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ့။ အဆင်ပြေ မပြေ ဒီ post မှာ ပြန်ပြောပေါ့နော်။
ကျေးဇူးအစ်မရေ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်… ဒီရက်ပိုင်းတော့ ဟင်းမချက်စားဖြစ်ဘူး … အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ ၀ယ်စားလိုက်တာပဲ ။
အစိမ်းကိုသန်.စင် ဆားနယ်ပြီး နေ တနေပြပြီးမှ
ဒါပေမယ့် ဝရုန်း ရဲ့နည်းလောက်တော့ကောင်းဘူး
ရေခွက်ထည်းကို မီးသွေးတုံးတွေ ငါးခြောက်တွေနဲ့ရောပြီး
ငါးကို အဆိုတိုင်းစားခြင်ရင်တော့ ချောင်းထဲဆင်းဖမ်းပြီး
ငါးတွေဆိုတာ မီးထဲမှာ ခုန်စွ ခုန်စွနဲ့ ကျက်တဲ့အခါ စားလို့ကောင်းမှကောင်း
I don’t think her name is “ဝရုန်း”
most probably, weRone = we are one
ငါး အဆိုတော် နဲ့ မှားနေပြီ
ငါးအစိမ်း= ငါးစို (ငါးအစို၊ ငါးခြောက်မဟုတ်)
******* ငါးဆားပေ့ါအောင် လုပ်နည်းများ မှန်သော်လည်း ဆားငံရည်နှင့်အတူ အချိုဓာတ်များပါ ပါသွားတတ်၍ စားမကောင်းပါ။ အကောင်းဆုံးမှာ မူလကတည်းက ဆားပေ့ါ မှ ကောင်းပါသည်။
ရက်စက်ပါ့ ကိုဂျော်နီအောင်ဘုရယ်… weRone (we are one) ပါ ရှင့်။ ဘယ်နယ်ဝရုန်းဖြစ်ရတာလဲ။ နောက်မှ အဲဒီနာမည် ဘယ်လိုရလဲ ဆိုတာ ကို သေချာရှင်းပြတော့ မ.ယ်။။
နည်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်နည်းက အရမ်းငန်တဲ့ ငါးကိုရေစိမ်တဲ့အခါ မုန့်ဟင်းခါးထဲမှာ ထည့်စားတဲ့ ရခိုင်ငှက်ပျောအူလေးတွေကို လှီးပြီးရောစိမ်ထားတဲ့ နည်းလည်းရှိတယ်။ သူလည်းအမှန်အကန် ဆားပေါ့တယ်။ ထမင်းကြမ်းနဲ့လည်း စိမ်လို့ရတယ်။ weRone လိုတော့ စကူမထည့်ဘူးပေါ့။သူကတော့ ထမင်းရဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ပြီး ဆားဓါတ်ကိုလိုသလိုလျော့လို့ရတယ်။ ထမင်းလေးတွေ ဖွေးပြီးပွလာတဲ့ အနေကို ကြည့်ပြီး ဆားကိုနှုတ်လို့ရတယ်။ ဆားကို ဆားရည်နဲ့ နှုတ်တာကတော့ အချိန်နည်းနည်းကြာတယ်။ ကျန်တဲ့နည်းတွေက တော့ မြန်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေက ငါးအဆိုအတိုင်းတော့ အရသာမရှိကြဘူး။ ဆားက နှပ်ထားသလိုဖြစ်နေတော့ အသားသေသွားတာပေါ့။ရေစိမ်တဲ့နည်းတွေ ငန်တဲ့ငါးခြောက်တွေကို သုံးတဲ့နည်းတွေပေါ့။ ဗမာပြည်မှာ ရောင်းတဲ့ဆားနယ်တွေက တော့ အခုဆားနယ်လုပ် အခုရောင်း ဆိုတော့ သိပ်တော့လည်းမငံပါဘူး၊ရေစိမ်လိုက်ရင်လည်း ခဏပဲစိမ်ရတယ်။နို့မိုဆို အသားပြဲသွားတယ်။weRone ပြောတဲ့ ငါးဆားနယ်ဆိုတာရခိုင်ဘက်ကလာတာကို ပြောတာလား။ရခိုင်ဘက်က ဆားနယ်တွေကတော့ အသားမာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ““ရမ်းဗြီးသမလေးတွီ လှရေလို့ ပြောဟာကယားဖူးတိမ်နော့၊လားနာကြည့်ဖို့မလို တွီးယုံနဲ့တင်လှကရေလို့ လီးပြောကြရေ။အကရောင်းကြားဖူးဟာ“
အမလေး ဖြေဖြေး ပြောပါ မမေသခင် ရယ်။ .. အစ်မ ပြောတာ ကိုကြည့်ပြီး လန့်လန့်သွားတယ်.. ။ ဒါပေမယ့် ရမ်းမ္မာဝတီသူတွေလှ တာက တောတကယ်… လို့မှတ်လိုက်တော့..
“ အမလေး ဖြေဖြေး ပြောပါ မမေသခင် ရယ်။ .. အစ်မ ပြောတာ ကိုကြည့်ပြီး လန့်လန့်သွားတယ်.. ” ဆိုတဲ့ အတွက် sorry ပါ။ ဒို့က အသိချင်းဖလှယ်တဲ့ သဘောတရားနဲ့ပဲ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတာပါ။ လန့်စရာတွေပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟုသုတလေးတွေရမယ်ထင်လို့ ၀င်ပြောမိတာပါ။ ဒို့ပြောတာ မင်းအတွက် လန့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ sorry………….
မမေသခင်ရယ် စိတ်မဆိုးပါနဲ။ ကျွန်မ ဆိုလိုတာ က အစ်မ ပြောတဲ့ ရခိုင်စကားသံ ကို ““ရမ်းဗြီးသမလေးတွီ လှရေလို့ ပြောဟာကယားဖူးတိမ်နော့၊လားနာကြည့်ဖို့မလို တွီးယုံနဲ့တင်လှကရေလို့ လီးပြောကြရေ။အကရောင်းကြားဖူးဟာ“ ကို ပြောတာ ပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်မ က အစ်မ ကို စ, လိုက်တာ ပါ။ စိတ်အနှေက်အယှက်ဖြစ်ရရင်တော့ စိတ်မရှိပါနဲလို့ နော်….
နည်းကောင်းလေးတခုပါပဲ။ ငါးသလောက်ပေါင်းအရိုးနူးမြန်ချင်ရင်တော့ ကွမ်းသီးထည့်ရတယ်ကြားဖူးပါတယ်။
၀ီ အာ 1
ကျွန်မ က တော့ လူချင်းတွေ့ရင်တောင် ချက်ကျွေးမယ့် အစီအစဉ် မရှိပါ….
၀င်းတော့ကာ ရယ်… ကိုယ့်တိုင်ချက်စား တော့ ကိုယ်ကျွမ်းတာပေါ့.. ဒါမှ မဟုတ်ရင် နည်း ကိုမှတ်ထားပြီး.. အိမ်က မိန်းမ ကိုချက်ကျွေးခိုင်းလိုက်ပါ…
ရခိုင်တွေလည်း တော်တော်များပါတယ်..။ အုပ်စုတောင့်ကြတယ်..။
မကြာခင်မှာတင်.. နယူးယောက်မှာ ရခိုင်သင်္ကြန်လုပ်တော့မယ်တဲ့..။
2011 Rakhaing Thingyan – 17th Annual Burmese New Year Water Festival
Sunday, July 17 at 11:00am
Location: 100 West 84th Street, PS9 Playground between Columbus Avenue and Amsterdam Avenue – New York, NY
ဂျာနယ်တွေ..သတင်းစာတွေတော့ ထည့်မစိမ်ပါနဲ့..အထဲမှာ..ပုံနှိပ်စာလုံးမှင်တွေက.. ခဲဓါတ်ပါတယ်..။
ဟင်းချက်တာကြိုက်တဲ့ ရွာထဲက လူတွေအတွက်